Ndava Kuziva Mwari Wandinonamata—Nyaya yaMarieta Manuel Bacudio
Ndava Kuziva Mwari Wandinonamata
Yakataurwa naMarieta Manuel Bacudio
Takashanyirwa nomumwe mufundisi wechechi yomweya ainzi anoporesa. Paakandibata ndakawira pasi “ndabatwa nomweya.” Pandakapengenuka, ndakanga ndava nesimba rokuporesa, randairwarira. Zvakafamba sei kuti izvi zvizoitika kwandiri uye zvakachinja sei upenyu hwangu? Ndisati ndakuudzai, regai ndimbokutsanangurirai makuriro angu.
NDAKABEREKWA musi wa10 December 1968 muIlocos Norte, kuPhilippines. Ndiri wechinomwe pavana gumi. Takakura tichipinda chechi yeRoma inopindwa nevakawanda kuPhilippines. Ndakapedza chikoro muna 1986 uye ndaida kuva mukoti. Asi hazvina kubudirira nokuti ndakabatwa nechirwere chakaipisisa. Ndakatofunga kuti ndava kufa. Ndapererwa, ndakateterera Mwari kuti andibatsire ndikamuvimbisa kuti kana ndikapora, ndaizomushumira kwoupenyu hwangu hwose.
Mushure menguva yakareba ndakazopora, uye ndakayeuka vimbiso yangu kuna Mwari. Saka muna June 1991 ndakatanga kuenda kuchikoro cheBhaibheri cheimwe chechi yomweya. Zvimwe zvaiitwa pachikoro apa zvaisanganisira kupa vanhu “chipo choMweya Mutsvene.” Ndaidawo kuva nesimba rokuporesa. Takadzidziswa kuti munhu anofanira kuita minamato uye kutsanya kuti azowana chipo ichi. Mumwe musi patainyengetera ndaida kunyepera vamwe kuti ndava nechipo ichi, saka ndakahwandira mumwe wataidzidza naye paainyengetera zvinonzwika. Ava kunopedza, ndakakurumidza kudzokera pandakanga ndakapfugama. Apedza, ndakamuudza kuti akanga anyengetera nezvei, achibva abvuma kuti ndakanga ndava ne“chipo” ichi!
Pandaienderera nezvidzidzo zvangu, ndakava nemibvunzo yakawanda. Somuenzaniso, Mateu 6:9 inotaura nezva“Baba” uye “zita” ravo. Mimwe yemibvunzo yandakazvibvunza ndeiyi: “NdiBaba vapi ava vaitaurwa naJesu?” uye “Izita raani rinofanira kutsveneswa?” Mhinduro dzandaipiwa nevadzidzisi vangu dzakanga dzisinganzwisisiki uye hadzina kundigutsa. Vakataura nezveUtatu uye vakati hazvinzwisisiki. Zvakandivhiringidza asi ndakaramba ndichingoita zvidzidzo zvangu zvoufundisi.
Kuonana neZvapupu zvaJehovha
Pachikoro cheBhaibheri chandaive, taiudzwa kuti Zvapupu zvaJehovha zvinodzidzisa nhema kupfuura zvimwe zvitendero zvose. Zvainziwo havatendi muna Kristu. Ndakapedzisira ndava kuvenga chitendero ichi zvisingaiti.
Mugore rangu rechipiri, ndakaenda kumba kunoona vabereki vangu pazororo. Mumwe mukoma wangu anonzi Carmen paakanzwa kuti ndaiva kumba akabva auyawo. Akanga abhabhatidzwa uye atova mushumiri wenguva yakazara weZvapupu zvaJehovha. Paakaedza kundidzidzisa nezvaMwari, ndakapindura nehasha ndichiti: “Ndinotoziva Mwari wandinonamata!” Ndakamupopotera ndichibva ndamusundira kwakadaro uko uye handina kuzombomupa mukana wokutaura neni zvakare.
Pandakadzokera kuchikoro, Carmen akanditumira bhurocha rinonzi Unofanira Kudavira Utatu Here? * Ndakariputanidza ndokurikanda mumoto. Ndakanga ndichakamugumbukira.
Kuenderera Mberi Noufundisi
Pandakapedza zvidzidzo zvoufundisi
Sezvandairamba ndichidzidzira zvoufundisi, ndakakwanisa kutendeutsawo vamwe. Ndakanyanya kufara amai vangu nehanzvadzi yangu pavakatangawo kupinda chechi yangu yomweya.
Ndakapedza kudzidzira zvoufundisi muna March 1994. Sezvataurwa pakutanga, panguva iyi takashanyirwa nemufundisi. Tose vadzidzi taida kumuona nokuti taifunga kuti ane chipo chokuporesa. Takakwira pachikuva paaiva ndokutanga kutamba mimhanzi naye tichirova maoko. Munhu wose waaibata aiwira pasi, “abatwa nemweya.” * Paakandibata ndakawirawo pasi uye handina kuzoziva zvaiitika. Pandakapengenuka ndakanga ndichitya asi ndakafara nokuti ndainzwa kuti ndava nesimba rokuporesa.
Pasina nguva ndakashandisa simba iri kuporesa mumwe mwana aipisa muviri chaizvo. Pandakanyengetera, mwana wacho akatanga kuti ziya teu-teu, achibva apora. Zvino ndakanga ndava kukwanisa kuzadzisa vimbiso yangu iya kuna Mwari. Zvisinei, chinoshamisa ndechokuti ndairamba ndichinzwa sokuti pane chimwe chinhu chandaifanira kuita. Nechemumwoyo ndaiziva kuti kunongova naMwari mumwe chete, asi ndaisamuziva. Uyewo pane dzidziso dzakawanda dzokuchechi kwangu dzandakanga ndisingagutsikani nadzo zvachose.
Ndakashandisa simba iri kuporesa mumwe mwana aipisa muviri chaizvo
Zvinhu Zvakachinja Mafungiro Angu
Paiitika zvinhu izvi, ndaitowedzera kuvenga Zvapupu zvaJehovha. Ndaiti ndikangoona bhuku reZvapupu, kupisa chete. Asi pane zvakazoitika zvandakanga ndisingafungiri. Ndakashatirwa pandakaziva kuti amai vakanga vasingachadi zvechechi yomweya. Carmen ndiye akanga achidzidza navo Bhaibheri. Ndakamutsamwira chaizvo.
Pane magazini yeMukai! yandakawana kumba kwaamai. Ndingadai ndakaipisa asi ndakada kuziva kuti amai vaimboverenga nezvei, saka ndakaivhura. Ndakasanganidzana nenyaya yaitaura nezvemumwe munhu aitsigira zvakasimba zvaidzidziswa nechechi yake. Asi paakatanga kuverenga mabhuku eZvapupu pamwe neBhaibheri, akagutsikana kuti dzidziso yoUtatu, yegehena uye yokuti mweya haufi hadzisi mumagwaro. Izvi zvakandibaya mwoyo. Ndidzo chaidzo dzidziso dzandaida kunzwisisa. Kubva ipapo, ndakava nechido chakasimba chokunzwisisa chokwadi cheBhaibheri.
Mushure mokunge ndazoverenga imwezve nyaya yaiva mumagazini inonzi Mukai!, inotaura nezvechimwe chidhakwa chainge chapindwa muropa nezvinodhaka asi chakazochinja mararamiro pachakadzidza Bhaibheri, ndakatanga kuverenga mabhuku akawanda eZvapupu. Ndakawana bhurocha rinonzi Zita raMwari Richagara Nokusingaperi. * Pandakariverenga ndakadzidza kuti Mwari anonzi Jehovha. Zvakandifadza chaizvo kudzidza chokwadi nezvaMwari mumwe chete wechokwadi!—Dheuteronomio 4:39; Jeremiya 10:10.
Zvakandifadza chaizvo kudzidza chokwadi nezvaMwari mumwe chete wechokwadi!
Ndakaramba ndichiverenga mabhuku acho muchivande uye ndakadzidza zvinhu zvakawanda zvechokwadi zviri muBhaibheri. Somuenzaniso pandaidzidzira zvoufundisi ndakanga ndadzidziswa kuti Jesu ndiMwari, asi ndakazodzidza muBhaibheri kuti iye “Mwanakomana waMwari mupenyu.”—Mateu 16:15, 16.
Pandakazoonanazve naCarmen akashamisika pandakamukumbira bhurocha rinonzi Zita raMwari Richagara Nokusingaperi nemamwewo mabhuku. Ndakanga ndapedza makore akawanda ndiri kuchikoro cheBhaibheri ndichidzidziswa nhema dzoga, ndichitopofumadzwa. Parizvino ndakanga ndisingachabatiki nomufaro nemhaka yechokwadi chandakanga ndava kudzidza muBhaibheri. Ndakanyatsoona kuti mashoko aJesu ndeechokwadi anoti: “Muchaziva chokwadi, uye chokwadi chichakusunungurai.” (Johani 8:32) Chokwadi ichi chakanga chava kuchinja upenyu hwangu.
Chokwadi ichi chakanga chava kuchinja upenyu hwangu
Pakambopera kanguva ndichifunga kuti ndaigona kunamata Jehovha Mwari muchivande asi ndichingopfuurira noufundisi hwangu. Pasina nguva ndakaona kuti ndakanga ndisingachakwanisi kudzidzisa dzidziso dzakawanda dzechechi yangu. Kunyange zvakadaro ndaitya kuti ndaizorarama nei kana ndikasiya zvoufundisi. Vanhu vechechi yangu vaizonyarira pai kana ndikasiya zvoufundisi ndichiva mumwe weZvapupu zvaJehovha? Saka ndakaramba ndiri mufundisi, asi ndaisadzidzisa dzidziso dzenhema dzechechi.
Precious ndiye akadzidza neni Bhaibheri
Pandakazoonanazve naCarmen akandikurudzira kuti ndiende kumusangano weZvapupu zvaJehovha. Sezvo ndaigara ndichienda kuguta reLaoag, uko kwaiva nemuzinda wedu, ndakanotsvaka nzvimbo inonamatirwa neZvapupu ikoko, inonzi Imba yoUmambo, sezvakwakanga kusina aindiziva. Ndakaonana naAlma Preciosa Villarin, uyo aiva nezita remadunhurirwa rokuti “Precious,” aiva mushumiri wenguva yakazara muungano iyoyo. Ndakabvuma kudzidza naye Bhaibheri kunyange zvazvo ndakanga ndisati ndava kufarira Zvapupu.
Mukoma wangu akanga aratidza mwoyo murefu chaizvo paaindiudza chokwadi cheBhaibheri. Ndizvo zvaingoitwawo naPrecious. Akandibatsira chaizvo kuti ndinzwisise Bhaibheri kunyange zvazvo ndaimbogumbuka, ndichiitisana nharo naye pamwe pacho ndichimbokwidza inzwi ndichisimbirira pane zvandakanga ndadzidziswa. Ndakabayiwa mwoyo nokufarirwa kwandaiitwa naPrecious nezvimwe Zvapupu. Vaizvininipisa uye vaiva vanyoro. Izvi zvakaita kuti ndide kunamata Jehovha.
Muna July 1995 ndakaona kuti ndaitofanira kusiya zvoufundisi. Nei? Zvakazarurwa 18:4 inotaura nezvechitendero chenhema ichiita zvokufananidzira ichiti: “Budai mariri, vanhu vangu, kana musingadi kugovana naro zvivi zvaro, uye kana musingadi kuwana mamwe matambudziko aro.” Asi ndaizowana kupi chouviri? VaHebheru 13:5 yakandidzidzisa kuti kana tikaita zvinodiwa naMwari, anotivimbisa kuti: “Handingambokuregerei kana kumbokusiyai.”
Ini naamai patakabhabhatidzwa
Kunyange zvazvo baba vangu nehanzvadzi yangu vakanga vava kundishora chaizvo, kwasara vhiki mbiri kuti ndibhabhatidzwe seChapupu ndakaita chivindi chokuenda kumba ndichibva ndapisa zvinhu zvose zvandaishandisa pandaiva mufundisi. Ndakanzwa kuti simba randaiva ndapiwa rakabva ranyangarika. Ndisati ndapisa zvinhu izvi ndaimboita hope dzemadzikirira. Izvi zvakabva zvaperawo. Madzangaradzimu andaimboona pahwindo reimba yangu akabva anyangarikawo. Kudzidza kwandaiita Bhaibheri kwakaita kuti ndione kuti zvose zvinonzi zvipo mazuva ano, zvakadai sesimba rekuporesa, hazvibvi kuna Mwari asi kumadhimoni. Ndinofara chaizvo kuti handichanetswi nemadhimoni, sezvakaita mushandikadzi akasunungurwa pa“dhimoni rokushopera” naPauro.—Mabasa 16:16-18.
Ndichishanda somushumiri wenguva yakazara weZvapupu zvaJehovha
Ndakafara chaizvo kubhabhatidzwa pamwe chete naAmai seZvapupu zvaJehovha muna September 1996! Ndabhabhatidzwa, ndakava mushumiri wenguva yakazara weZvapupu zvaJehovha uye ndakanakidzwa nebasa iri kwemakore akawanda.
Iye zvino ndakaroorwa nomurume anonzi Silver. Tiri kushanda nesimba kudzidzisa mwanasikana wedu nzira yechokwadi cheBhaibheri. Vamwe vakoma vangu vaviri nomunun’una wangu vava kushumirawo Jehovha. Kunyange zvazvo ndichidemba kuti kwemakore akawanda ndakanga ndisingazivi Mwari, ndinofara chaizvo kuti iye zvino ndava kuziva Mwari wandinonamata.
Ndiine murume wangu, mwanasikana wedu, uye vamwe voukama vakawanda vava kunamata pamwe nesu
^ ndima 10 Rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha asi harichadhindwi.
^ ndima 13 Mashoko okuti “kubatwa nemweya” anoshandiswa nevezvimwe zvitendero kureva zvavanoti zvinoitika kana mutendi achinzi ava ne“mweya.” Mweya uyu unonzi unouya nesimba zvokuti munhu anowira pasi.